TikTok yeyona ndawo iphambili yevidiyo yefom yefom emfutshane, ebonelela ngesiqulatho esonwabisayo, esizenzekelayo, nesinyanisekileyo. Akukho mathandabuzo malunga nokukhula kwayo:
Iintengiso zeVidiyo -Ukuxhomekeka kwindawo othanda ukubeka kuyo, umlinganiso we-9: 16, 1: 1, okanye i-16: 9 inokusetyenziswa ngeevidiyo imizuzwana emi-5 ukuya kwimizuzwana engama-60 ubude .mp4, .mov, .mpeg, .3gp , okanye ifomathi ye .avi.
Njengevenkile ezimeleyo yobucwebe, uSlate & Xelela babejonge ukwakha ulwazi kunye nokuqwalaselwa ngexesha lokuthengisa eliphakamileyo. Ngokusebenzisa i-TikTok yesixhobo esisebenziseka ngokulula seSmart seVidiyo yokuYila kunye nokwenza iphulo kwiminyhadala, badala ulonwabo kunye nokudala ubuchule obufikelele kubasebenzisi be-4M TikTok kwaye bakhokelela kwiseshoni enye ye-1,000 ngeza kwitshathi uguquko, lubanceda bafeze iinjongo zabo zokubuyela kwintengiso kwi-2X kwiinyanga nje ezi-6.
tags: b2cb2c intengisointengiso yabathengiiyaIntengiso yangaphakathi nohleloufakelo lwangaphakathi nohlelointengiso yeselulaTikTokukubekwa kwentengiso yetiktoktiktok umphathitiktok yeshishiniizibalo zetiktokimicimbi yewebhusayithi ye-tiktokzevidiyointengiso yevidiyo